Tobanaan qof oo ku dhintay banaabaxyadii ugu dambeeyay dalka Syria. – SBC
Tobanaan qof oo ku dhintay banaabaxyadii ugu dambeeyay dalka Syria.
Ugu yaraan 62 qof ayaa ku dhintay,iyadoona boqolaal kale ay ku dhaawacmeen banaabaxyadii ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka Liibiya sida laga soo xigtay kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ku sugan dalka Syria.
Waxaana lagu eedeynayaa Dowlada Syria in ay ka dambaysay dhimashada tobanaanka rayidka ah ee samaynayay banaabaxyada isbadal doonka ah ee inta badan magaalooyinka dalkaasi ka socda.
Goob joogayaal ku sugan Magaalada Deraa,gaar ahaana ka tirsan kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegay warbaahinta in inta badan dadka ku dhintay banaabaxyadii maalintii shalay ka dhacay dalkaasi ay ahaayeen kuwo si toos ah rasaas ay ugu fureen ciidamada dowlada Syria.
Tirada dadka u dhimanaya dhaawacyadii kasoo gaaray rasaasta ay fureen Ciidamada Dowlada Syria ayaa waxaa suura gal ah In ay kordhaan sida laga soo xogtay saraakiil ka tirsan masuuliyiinta cisbitaalada Daraa.
Dhanka kale dowlada Syria waxaa ay dhinaceeda sheegtay in ay uga dhinteen Daraa Afar ka tirsan Ciidamadeeda,kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen koox hubaysan oo sida ay sheegeen kusoo qaaday weerar argagixiso,waxaana ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen Labo kamid ah kooxihii weerarka kusoo qaaday Maalintii jimcaha.